Mid ka mid ah qaabab music ugu caansan u iPhone waa MP3, maadaama ay la xisaabay in tayada audio macquul ah oo aan u baahnayn meel bilaash ah oo aad u badan oo ku saabsan qalab aad. Sida AAC, halka ay u muuqato in ay ka xoogbadan, in MP3, sida xaqiiqada ah waxaa aad u adag in la maqlo farqiga dhabta ah ee u dhexeeya labada, gaar ahaan marka maqashay, iyadoo joogta bitrates sare. Sidoo kale, dhibaatada la AAC waa in hindisooyin badan ma taageeraan file maqal ah, halka MP3 waxaa taageera ficil qalab kasta. Kale oo kale, regelingen, ayaa dhab ahaan aad u fiican oo tayo leh codka, sababtoo ah ma aysan isticmaali riixo oo dhan, in kastoo files regelingen ay si weyn uga weyn. All oo dhan, ee qodobkan waxa aanu sharixi doona sida ay u gudbiyaan MP3 in iPhone la Lugood iyo sidoo kale liiska software yar oo sahlan kale, taas oo loo isticmaali karaa ujeedadaas.
Habka 1. MP3 Transfer si iPhone via Lugood
Connect aad iPhone in kombiyuutarka via cable USB ah oo la furo Lugood.
Waxaad dooran iPhone ee Lugood menu ugu weyn.
Hadda, guji File> Folder Dhamaan Library in ay ku darto gal ah oo ay ku jiraan MP3 faylasha aad rabto in lagu wareejiyo si iPhone.
Hadii aad waligaa beehsa aad iPhone la Lugood ee kombiyuutarka iyo waxa ku jira oo dhan music aad hore u leedahay on your iPhone, dooran Dhan Music Library in nidaameed Music menu.
Haddii kale, haddii aad rabto si ay u maareeyaan maktabadda music aad, waxaad dooran kartaa qaybaha albums / music gaar ah si aad u beehsa aad iPhone.
Marka aad maktabadda music maareeyey, guji badhanka Codso in geeska hoose ee saxda ah.
Sug MP3 files si aad u wareejiyo si aad iPhone. Ku raaxayso!
PS Habkan lama isticmaalo computer haddii adiga oo isticmaalaya qof kale, sida iPhone oo kaliya la beehsa karaa mid computer waqti. Othervise, files aad iPhone laga saari doonaa. Xaaladdan oo fariin tani ka muuqan doontaa:
Sida caadiga ah ma rabno in masixi oo dhan music ka iPhone. Lugood ma aha had iyo jeer software ugu habboon in la isticmaalo, xitaa haddii aad ka mid computer oo kaliya isticmaalaan, wax dhibaato ah ma ay dhici kartaa. In qaybta xigta a software kale oo yar la soo daabici doonaa oo overviewed.
Habka 2. Top 4 Software si ay u gudbiyaan MP3 Music inay iPhone aan Lugood
Price: $ 49.95 (version lacag la'aan ah ayaa sidoo kale laga heli karaa iyadoo xadidan muuqaalada) Size: 14.5 MB Ajandooyinka: Windows dulmar kooban: MFT MediaMonkey ma aha oo kaliya u ogolaanaya in ay si fudud ku wareejiso MP3 in iPhone ama u maamuli lahayd audio / video files, waxa ay sidoo kale awoodo badalo music galay qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan WMA, AVI, MP4 iyo in ka badan. Intaa waxaa dheer, software ka mid ah raad raac shaqada, auto-DJ, saamaynta muuqaalaynta iyo xitaa ka sii badan! Music sidoo kale lagala soo bixi karaa websites via daro Podcatcher software iyo badbaadiyey si toos ah buugga MediaMonkey. Waxaa la socon kara iPhone iyo qalabka Android ugu. Version Free of software sidoo kale waa la heli karaa.
Price: $ 39.95 (version maxkamad xor ah sidoo kale waa la heli karo) Size: 29,91 Ajandooyinka: Windows & Mac dulmar kooban: TunesGo waa mid fudud aad, inkastoo software functional xogta aad (oo ay ku jiraan files music) wareejinta ka iPhone in computer, iyo ku-xigeen qeybsanaan. Waxay leedahay interface ah dareen leh oo tiro balaadhan oo ah fursadaha sameeyaan software this aad u faa'iido badan, haddii aad doonayso in aad qabato iPhone MP3 kala iibsiga. In la barbardhigo Lugood, ma Weligaa ma isticmaali doonaa multimedia ka dib markii howlan iPhone kombiyuutarka, taas oo ka dhigaysa in ka badan user-friendly oo sahlan in la isticmaalo. Intaa waxaa dheer, software si toos ah u baddalaya qaabab music iyo video, sidaa darteed ayay la jaanqaadaan aaladaha Apple. Dhamaan qodobadaas, iyo sidoo kale kala dooranayo arimaha maaraynta xogta kala duwan ka dhigi TunesGo Wondershare kale oo aad u wanaagsan in Lugood. More Lugood kale oo halkan >> (/itunes/free-alternatives-to-itunes.html)
Price: laga bilaabo $19.99 Size: 8 MB ​​Ajandooyinka: Windows dulmar kooban: software CopyTrans waxaa gaar ahaan loogu talagalay wareejinta iyo maaraynta xogta, sida music, xiriirada, barnaamijyadooda, sawiro iyo ka badan. Hadda, waxaa jira 4 weyn ee software: CopyTrans, CopyTrans Photo, CopyTrans Xiriirada iyo CopyTrans Apps, mid kasta oo u ogolaanaya in ay maareeyaan nooc gaar ah oo xogta. Waayo, sahlanaato, waa la heli karaa si ay u iibsadaan set 4-pack of software ah $29.96. In kastoo, oo diiradda saaraya music, CopyTrans kuu ogolaanaya in aad si fudud uga soo iPhone wareejiyo MP3 in computer isagoo aan la cabsi in ay lumiyaan wax kasta (si joogta ah u dhacaya Lugood), bixinta adeeg ammaan ah oo xasilloon for our ku qanacsan tahay. Waxaa si fiican u la shaqeysaa maktabadda Lugood. Ugu dambayntii, waxa ay taageertaa dhamaan noocyada iPhone iyo siinaysaa fursad ay isku dayaan version ah oo lacag la'aan ah.
Price: laga bilaabo $34.99 Size: 10 MB Ajandooyinka: Windows iyo Mac dulmar kooban: Marka la barbardhigo Lugood, iExplorer u ogolaanaya in ay nuqul MP3 files ka iPhone in computer, kuwaas oo si gaar ah faa'iido marka la isku dayayo in la helo music ma kombiyuutar guri. Waxaa kale oo u ogolaanaya in ay si deg deg ah ay u maareeyaan playlists iyo badbaadin in fayl gaar ah loogu isticmaalo mustaqbalka, iyo sidoo kale soo celin maktabadda Lugood aad ka iPhone haddii ay jiraan wax ku dhacay computer guriga. Intaas waxaa sii dheer, iExplorer ka hortagtaa tus, by raad dhammaan faylasha ay horey u maktabadda. Hal-click interface, waafaqsan yahay Windows iyo Mac, - doorasho weyn u user kasta Apple!
> Resource > iPhone > 2 Methods si ay u gudbiyaan MP3 in iPhone